site na nhazi na 20-06-18
Companylọ ọrụ anyị na-elebara anya ọ bụghị naanị mbọ nke ndị ọrụ kamakwa ahụike nke anụ ahụ na nke uche. Dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ anyị ga-ahazi nzukọ egwuregwu iji kwe ka ndị ọrụ na-emega ahụ. N'afọ gara aga, ndị ọrụ niile na-ekere òkè na egwuregwu ahụ. N’oge egwuregwu na-ezukọ, anyị edobela…
Ọkacha amara ndị ọrụ mgbako nke 2019
Mgbakọ nkwanye ugwu dị egwu nke 2019 2020/6/15, ụlọ ọrụ anyị ejidela ọgbakọ nkwuputa nke pụtara ìhè nke 2019. N'oge ogbako ahụ, nke mbụ, onye isi anyị bụ Mr.Xie chịkọtara mmezu nke afọ gara aga. Olu ahịa nke igwe na-esite na ntanetị nwere abawanye ...
Ekelere n’igwe websaịtị ọhụrụ nke Hangzhou Hongli Machinery Co., Ltd. n’uzo ọha!
site na nhazi na 20-06-17
E guzobere ụlọ ọrụ ahụ na August 2002 ma ugbu a nwere ihe karịrị ndị ọrụ 70 na ebe 8 ọrụaka. Companylọ ọrụ ahụ dị na Linpu Town Industrial Park, Xiaoshan, Hangzhou City, Zhejiang Province, nke dị otu kilomita site na Linpu ọpụpụ nke okporo ụzọ Hangjinqu…